कहिले बन्ला गौशाला–चुच्चेपाटी सडक? :: Setopati
कहिले बन्ला गौशाला–चुच्चेपाटी सडक? डिभिजन कार्यालय भन्छः देउसी खेल्न जाँदा चिल्ला सडकमा हिँड्न पाइन्छ
सुधिर भण्डारी र निशा भण्डारी काठमाडौं, असोज २३
गौशाला–चुच्चेपाटी सडकको दुरावस्था। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
गौशाला–चुच्चेपाटी क्षेत्रका स्थानीयको एउटै प्रश्न छ, कालोपत्रे सडक कहिले बन्छ?
सडक प्रयोगकर्ता र स्थानीयले यो बाटो राम्रो नदेखेको वर्षौं भइसक्यो। पानी पर्दा हिलाम्मे, घामलाग्दा धुलाम्मे सहनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। सडक दुराअवस्थाको कारण सडक दुर्घटना पनि बढिरहेको स्थानीय बताउँछन्।
लकडाउन समयमा उपत्यकाका थुप्रै सडक चिल्ला बने। तर असारमै सकिनु पर्ने गौशाला–चुच्चेपाटी सडक निर्माण काम असोज सकिन लाग्दासमेत उस्तै रहेपछि स्थानीय हैरान छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय भने सडक यहाँका अरू सबै समस्या सुल्झाएर काम गर्न लागेकाले ढिलाइ भएको बताउँछन्। मिलेजति ठाउँमा कालोपत्रे गरेर छाड्नुको साटो दीर्घकालीन समाधानसहित गर्न लागेकाले केही ढिलाइ भएको डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ।
डिभिजन कार्यालय काठमाडौं प्रमुख कुबेर नेपालीका अनुसार यस क्षेत्रमा पुराना खानेपानी पाइप मुख्य बाधा बनेको हो।
‘यहाँ राणाकालीन समयका खानेपानीका पाइप रहेछन्, जसमा सयौं लिकेज थिए। त्यसै कालोपत्रे गरेको भए स्थानीयले केही महिनापछि फेरि दुःख पाउँथे। अहिले खानेपानीसगँ सहकार्य गरेर त्यो समस्या समाधान भइसक्यो। अब धमाधम निर्माण हुन्छ,’ नेपालीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै पुराना जाम भएका ढल, अव्यवस्थित विद्युतीय तार भूमिगत, टेलिकम लगायत समस्या हल गर्न समन्वय गर्नु परेकाले ढिलाइ भएको उनले बताए। यो क्षेत्रमा भएका १६ वटा शोरुम र वर्कशपबाट निस्कने लुब्रिकेन्ट, इन्धनलगायत फोहोर ढलमा मिसाइएको नेपालीले सुनाए।
‘शोरुम र वर्कशपबाट निस्कने फोहोर ढलमा मिसाउँदा जाम हुने र सडक बिग्रने रहेछ। त्यो काम पूरै बन्द गराएका छौं,’ उनले भने, 'विभिन्न अवरोधका बावजुद काम चलिरहँदा सडक निर्माण मजदुरलाई कोरोना देखिएपछि काम रोकियो। अहिले फेरि सुरू गरेका छौं।'
नेपालीका अनुसार निर्माण कम्पनी र सरकारी निकाय दुवै पक्षले इमानदारी पूर्वक काम गरिरहेको छ। सडक पुनर्निर्माणको जिम्मा कालिका–बेजांसी जेभीले पाएको हो। ठेक्का अन्तरगत गौशाला–चाबहिल चोक, चाबहिल चोक –चुच्चेपाटी र चाबहिल चोक– गोपीकृष्णसम्म पर्छ।
‘जनताले गुनासो गरेझैं देखिनेगरी काम भएको छैन। तर प्राविधिक कुरा हेर्ने हो भने हामीले सडक कालोपत्रे गर्ने बाहेक सबै झन्झटिला काम गरिसकेका छौ,’ नेपालीले भने।
उनका अनुसार खानेपानी, ढल, बिजुली आदि सडक बिगार्ने समस्या सुल्झाएर मात्र निर्माण काम थालिएको हो। एउटा निकायले निर्माण गरेपछि अर्को निकायले नबिगार्ने गरी काम गरिएको हुँदा यो नमूना सडक हुने उनको दावी छ।
‘सडक कालो पत्रे मात्रै गर्ने भए त काम धेरै पहिले सकिन्थ्यो। तर हामीले दीगो निर्माणमा ध्यान दियौ। यो सडक तयार भएपछि कुनै पनि कारणले खन्नु पर्दैन र आफैँ बिग्रने सम्भावना पनि कम छ,’ उनले भने, ‘केही समयमै जनताले देख्नेगरी निर्माण सुरू हुनेछ। तिहारमा देउसी खेल्न जाँदा चिल्ला सडकमा हिँड्न पाइन्छ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २३, २०७७, १२:५४:००